Intlawulo yokuhanjiswa kwee-bouquets.
Ukuza kuthi ga ngoku, zimbini iindlela zokubhatala ezikhoyo ngoku-odola iintyatyambo:
1. Amakhadi ebhanki
Ungahlawula nge-VISA, i-VisaElectron, i-MasterCard, i-Maestro, amakhadi e-MIR, kwaye ukongeza, kunye namakhadi eenkqubo zokuhlawula zamanye amazwe- VisaInternational, MasterCardInternational, DinersClubInternational, AmericanExpress.
Unxibelelwano lwentlawulo yoku-odola ilula kwaye inomdla:
Intlawulo ngamakhadi yenziwa ngenkqubo yentlawulo ezenzekelayo "CloudPayments". Kwimizuzu elishumi ungala ukuhlawula iodolo. Ukuba ixesha lidlulile, kwaye awuzange uthathe sigqibo kumyalelo, isicelo siya kucinywa.
Isatifikethi sokuthobela ii-PCIDSS "CloudPayments":
Ngaphandle kokuphambuka kwiimfuno zeenkqubo zentlawulo zamanye amazwe, ukwenzela ukwandisa inqanaba lokhuseleko, itekhnoloji yakutshanje iyasetyenziswa - 3D Secure / SecureCode. Ugcwalisa le fomu, uqinisekise intlawulo yakho usebenzisa iqhosha elikhethekileyo kwaye ufake ikhowudi efunyenwe kwiSMS kwicandelo elifanelekileyo. Unokwaliwa intlawulo kuphela ukuba ibhanki yakho ayinaso isatifikethi sokusebenzisa obu buchwephesha.
Ukuba ufuna ukufumana iinkcukacha ezithe vetshe malunga nokuhlawulwa kwee-odolo kunye nekhadi lakho kwi-Intanethi, ukusombulula iingxaki ngentlawulo, tsalela inkonzo yenkxaso yebhanki kwinombolo eboniswe ekhadini.
2. Ukuhlawulwa kwemali ngaphandle kwamaqumrhu asemthethweni
Amaziko asemthethweni ahlawula iiodolo ezivela kwiakhawunti yangoku, ngokwee-invoice ezikhutshwe yile nkqubo.
Ukufumana i-invoyisi yentlawulo, xa ufaka iodolo, khetha indlela yokubhatala yamaqumrhu asemthethweni kwaye ufake iinkcukacha zombutho wakho ngendlela emfutshane kwaye inkqubo iya kuthumela i-invoice ezenzekelayo ngokuzenzekelayo kwidilesi ye-imeyile echaziweyo:
Emva kokufumana intlawulo, uya kufumana iSMS, i-imeyile kunye nesaziso kwiakhawunti yakho yobuqu yokuba i-odolo iqalile ukusebenza.